We Fight We Win. -- " More than Media ": အကြမ်းဖက်မှုများကို သတိရှိရှိ တား ကြမည်။
အကြမ်းဖက်မှုများကို သတိရှိရှိ တား ကြမည်။
အင်းစိန်အဓိက၇ုဏ်းတားဆီးရေးအတွက်အင်းစိန်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအဖွဲ့မှကိုမြင့်ဆွေ၊ဒေါက်တာဇော်မင်းပါ၁၀ဦးမှရွာမဆရာတော်ဦးတိလောကနှင့်ကျောင်းတိုက်၅ခု၊မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊NLDအင်းစိန်၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့နှင့်မတ်၃၀၊၃၁၊ဧပြီ၁ရက်နေ့တို့တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။၂ရက်နေ့တွင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့်တွေ့ဆုံမည်။ — at အင်းစိန်NLD၇ုံး။.
Like · · Share · Sunday via mobile · ·
Why u r fucking silent?u have to tell something.